4 Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida forklift - Shiinaha 4 Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida forklift, Soo-saareyaasha
3 TON 4 × 4 Afar wareeg oo Forklift ah
Gawaarida gawaarida ee loo yaqaan 'WIK 4 wheel drive forklift' waxay leedahay waqti-buuxa afar-gawaarida ah, oo si weyn u xoojiya awoodda forklift. Waa baabuur injineernimo oo si badbaado leh oo hufan u fulin karta alaab rarista, dejinta, isku soo ururinta iyo wax ka qabashada howlaha dhulka aan sinnayn sida dhoobada, beeraha, iyo buuraha. Waxay leedahay waxqabadka ka baxsan wadada, waxqabadka iyo dhaqaajinta. Waxay beddeli kartaa lifaaqyo kala duwan si loo hagaajiyo waxtarka shaqada. Qalab loogu talagalay agabka rarida iyo dejinta ee ma ...
3.5 TON 4 × 4 Afar wareeg oo Forklift ah
4 × 4 Forklift 1.8-mitir hoostiisa
3 tan 4WD isteerinka dambe ee Gawaarida Xamuulka
3TON 4WD Gawaarida Xamuulka
3.5TON 4WD Gawaarida Xamuulka
WIK40-80 4 gaari xamuul ah oo forklift ah
WIK20-30 4 gaari xamuul ah oo forklift ah
4 tan oo dhan-in-mid 4X4 forklift
3.5ton 4WD isteerinka dambe ee Gawaarida Xamuulka